पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना प्रतिनिधिसभातर्फ भक्तपुर २ बाट उम्मेदवार बनेका छन् । नेपाली कांग्रेसले ढुंगानालाई सो क्षेत्रमा उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेपछि धेरैलाई आश्चर्यमा पारेको छ । ०४८ सालको आमनिर्वाचनबाट काठमाडौं–२ बाट निर्वाचित भएका वरिष्ठ अधिवक्ता ढुंगाना प्रतिनिधिसभामा सभामुख बनेका थिए । पछिल्लो एक दशकयता सक्रिय राजनीतिमा नदेखिएका उनी नागरिक अगुवा र मानवअधिकारवादीका रूपमा परिचित छन् । उनले आफ्नो उम्मेदवारी राजनीतिमा देखिएको विकृति सफा गर्नका लागि भएको बताएका छन् । उनै ढुंगानासँग कारोबारकर्मी जगन्नाथ दुलालले गरेको कुराकानीको सार:
ढुंगानाले सम्मान र इज्जतमात्र पाउनुहुन्छ
नेकपा एमालेका युवा नेता महेश बस्नेतले भक्तपुर क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका बस्नेत आफूले गरेका काम र वाम गठबन्धनका कारण आफ्नो जित सुनिश्चित रहेको दाबी गर्छन् । लामो समयपछि सक्रिय राजनीतिमा फर्किएका पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना उनका प्रतिस्पर्धी छन् । ढुंगानाले भक्तपुरबाट सम्मान र इज्जत पाए पनि मत भने नपाउने बस्नेतको दाबी छ । २०७० सालमा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा तेस्रो भएका बस्नेत यो पटक २०४६ सालदेखिको कांग्रेसको गढ तोड्ने दाबी गर्छन् । उनै बस्नेतसँग चुनावी तयारी, रणनीति र एजेन्डाका बारेमा कारोबारकर्मी तीर्थराज बस्नेतले गरेको कुराकानीको सार :
विगत लामो समय पर्यटकलाई पदयात्रामा घुमाउने व्यवसाय सम्हालेका नवराज दाहाल भर्खरै मात्र झन्डै १ हजार २ सय ट्रेकिङ व्यवसायीहरूको छाता संगठन ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । झन्डै ३० वर्षदेखि पर्यटन व्यवसायमा लागेका दाहाल यसअघि सन् २००५ मा टानको कार्यसमिति सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए भने सन् २००८ मा महासचिव भएर काम गरेको अनुभव छ ।
६ वर्षदेखि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका जोसेफ सिल्भानुस एकैनाशको बृद्धिदरमा (कन्सिस्टेन्ट ग्रोथमा) विश्वास राख्छन् । नेपालबाहेक अन्य ८९ देशमा बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक अन्तर्राष्ट्रिय बैंक हो । नेपालमा तत्काल तरलताको समस्या नदोहोरिएमा ब्याजदर घट्ने बताउने जोसेफ स्थानीय तहमा शाखा विस्तार नगर्ने सोचमा छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई स्थानीय तहमा जानै पर्छ भन्दा पनि विज्ञताअनुसारको काम गर्न दिनुपर्ने उनको तर्क छ । बैंकअनुसार व्यावसायिक मोड फरक हुने भएकाले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि ढोकाका रूपमा रहेकाले त्यहीअनुसार काम गर्न दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । बैंकमा हुने जोखिमको सुरक्षाका लागि लगानी गर्न नसक्ने हो भने बैंक संकटमा पर्ने सल्लाह दिने जोसेफसँग समग्र नेपाली बैंकिङ क्षेत्रका अवसर तथा चुनौतीका विषयमा कारोबारले गरेको कुराकानीको सार
सरकारी सेवाबाट अवकाशपछि कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा निर्देशकसमेत बनिसकेका भुसाल अहिले पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् । भूकम्प गएको साढे दुई वर्ष भए पनि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम अझै सुस्त छ । ९० प्रतिशतभन्दा बढी निजी आवास निर्माण हुन सकेका छैनन्, तर भूकम्पपछि मात्र प्राधिकरणले उनीसहित चार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाएको छ । आगामी जेठभित्र ६० प्रतिशत निजी आवास निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य राखेको बताउने भुसालसँग पुनर्निर्माणको अवस्था, समस्या, चुनौती, आगामी योजनालगायतबारे कारोबारले गरेको कुराकानीको सार
विगतमा चुनाव भन्नेबित्तिकै झोला बोकेर जेलनेल बसेका तथा राजनीतिक विचार भन्न सक्नेहरू मात्रै चुनावी मैदानमा हुनुपर्ने सोच रहँदै आएको थियो । तर, पछिल्लो समय चुनावमा भने सबै राजनीतिक दलले आर्थिक समृद्धि र विकासका नारा सार्न थालेका छन् । मुलुकको राजनीति र क्रान्तिकारी कुरा मात्रै बिक्ने समाज अहिले विकास खोजिरहेको छ भने प्रत्येक घर आर्थिक समृद्धिका लागि लडिरहेको छ । पछिल्लो समयका पार्टीहरूको घोषणापत्र हेर्ने हो भने पनि समृद्धि र आर्थिक विकासकै मुद्दा अगाडि बढाएको पाइन्छ । मुद्दा मात्रै फेर्ने तर नेतृत्व नफेर्ने पार्टीहरूले अहिले निकट भविष्यमै हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि भने युवा उद्यमीलाई उम्मेदवारका रूपमा अगाडि सारेका छन् ।
मुलुकको पुरानो औद्योगिक तथा व्यापारिक घराना ज्योति समूहको तेस्रो पुस्ताका प्रतिभाशाली प्रतिनिधि अभिक ज्योति पछिल्लो कम्पनी नेपाल जेनरल मार्केटिङ प्रालि (एनजीएम) का अध्यक्ष हुन् । हजुरबुबा मणिहर्ष ज्योतिले स्थापना गरेको व्यवसायलाई दोस्रो पुस्ताका पद्मज्योति र अभिकका बुबा डा. रूप ज्योतिले उचाइमा पु¥याएका छन् । तेस्रो पुस्ताका अभिक प्रतिस्पर्धी व्यापार र बदलिँदो प्रविधिसँग उत्तिकै जानकार रहे पनि सधँै लो प्रोफाइलमा रहन रुचाउँछन् । ज्योति समूहअन्तर्गत दर्जनभन्दा धेरै उत्पादनमूलक उद्योग तथा भारतका स्थापित ब्रान्डका ट्रेडिङ व्यवसाय सञ्चालनमा छन् । ५५ वर्षभन्दा लामो समय नेपाली डन्डी बजारमा आफ्नो प्रभुत्व अब्बल बनाउन सफल हिमाल स्टिल ज्योति समूहभित्रकै प्रतिष्ठित कम्पनी हो । युवा उद्यमी ज्योतिले नर्थ इस्टर्न युनिभर्सिटी, बोस्टन, अमेरिकाबाट इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा स्नातक र इन्जिनियरिङ म्यानेजेमेन्टमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । सन् २००४ मा अमेरिकाको उच्च शिक्षापछि नेपाल फर्किएका उनी हिमाल आइरनमा बजार व्यवस्थापन, कम्प्युटर शाखा, नेटवर्क म्यानेजमेन्टलगायतमा कामको अनुभवी छन् । अहिले पनि ज्योति समूहको सूचना प्रविधि डेस्क ज्योतिले हेर्छन् ।
वनक्षेत्रका समस्या सुधार गरेरै छाड्छु
‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने उखान चर्चित नै छ । देशको समग्र भू–भागको करिब ४४ प्रतिशत वनक्षेत्रले ओगटेको तथ्यांक छ । यसलाई नेपालीले छाती फुलाएर गर्व गर्ने गर्दछन् । तर, यहाँको वन पैदावारको मागअनुसार आपूर्ति व्यवस्थापन सहज छैन । नेपाल जंगलबाटै धनी बन्न सक्छ, तर सही रूपमा व्यवस्थापन हुन सके मात्र । बर्सेनि हाम्रो वन पैदावारले नेपालीको आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन । विदेशमा निर्भर छौं । कहिले हुन सक्छौं वन पैदावारमा आत्मनिर्भर ? वनजंगल भएर पनि काठ आयात किन गर्छौं ? कमजोरी केको ? नीति या नियतिको ? सधैं सर्वसाधारणको मनमा उब्जने प्रश्न यिनै हुन् । वन मन्त्रालयमा धेरै नेताले नेतृत्व फेरिसके, तर अझै पनि वनक्षेत्रमा देखिएका कतिपय समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् । हुन त पछिल्लो समय वन पैदावारको उत्पादन बढाउने कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन थालेका छन् । वनक्षेत्रमा देखिएका विकृति, समस्याहरू जटिल नभएको र सुधार गर्ने इच्छाशक्तिका साथ वनको नेतृत्व गरेको बताउँछन् वनमन्त्री विक्रम पाण्डे ।
नेपालमा लगानीको अवसर हेरिरहेका छौं
क्यानडाले नेपाललाई गत साता १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको सहायता उपलब्ध गराएको छ । भूकम्पपछिको दाता सम्मेलनमा क्यानडाले ५ अर्ब २० करोडबराबरको सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकोमा बाँकी सो रकम भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, आर्थिक वृद्धि र स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइका लागि उपलब्ध गराएको हो । भूकम्पपछिको तत्कालीन राहत र उद्धारका लागिसमेत सहयोग गरेको क्यानडा र नेपालबीच विगत पाँच दशकदेखिको सम्बन्ध छ । यति लामो समयदेखि दुवै देशबीच सम्बन्ध भए पनि नेपालमा क्यानडाको राजदूतावास छैन । काउन्सिलर कार्यालय मात्र छ । भारतमा रहेको क्यानेडियन राजदूतावासले नेपाल हेर्ने गरेको छ । हालै काठमाडौं आएका गैर आवासीय क्यानेडियन राजदूत नादिर पटेलसँग नेपाल र क्यानडाबीचको सम्बन्ध, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सहायता, क्यानडाले नेपालमा गर्न सक्ने लगानीका क्षेत्र र अवस्थालगायतबारे सम्पादक कुबेर चालिसे र सम्वाददाता भीम गौतमले गरेको कुराकानी
आशिष गजुरेल सिन्धुलीको ढुंग्रेबासका ३७ वर्षीय युवा हुन्, तर उनी ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङ गर्ने नेपालका कम व्यक्तिमध्ये एक हुन् । जर्मनीको टेक्निकल युनिभर्सिटी युनिकबाट ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गरेका गजुरेल हाल लगानी बोर्डमा यातायात क्षेत्र हेर्ने परामर्शदाताका रूपमा काम गर्छन् । काठमाडौं उपत्यकालगायत मुख्य सहरहरूमा यातायात व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ, तर सरकारसँग यसको समाधानका लागि स्पष्ट नीति तथा योजना छैन । अस्तव्यस्त बन्दै गरेको यातायात व्यवस्थापन, यसका लागि पूर्वाधार निर्माण र अहिलेको अवस्था, सडक सुरक्षा, गुणस्तरका साथै भावी कदमलगायतबारे कारोबारकर्मी भीम गौतमले गजुरेलसँग गरेको कुराकानीको सार
मुलुकको व्यापारघाटा बर्सेनि बढ्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा मात्र ९ खर्ब ९० अर्ब १२ करोडको आयात भयो भने निर्यात ७३ अर्ब ५ करोड मात्र भयो । कुल व्यापारघाटा मात्र गत वर्ष ९ खर्ब १७ अर्ब ६ करोड थियो । आर्थिक वर्ष ०७२/७३ भन्दा गत वर्ष १ खर्ब २७ अर्ब बढी आयात बढेको छ भने व्यापारघाटा पनि झन्डै १ खर्बले बढेको छ । यो तथ्यांकले पनि आयात बढ्दै गए पनि सोहीअनुसार निर्यात हुन नसक्दा व्यापारघाटा भयावह अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । स्थानीय उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु, लागत बढ्दै जानु, गुणस्तरमा कमी, निर्यातयोग्य वस्तुमा प्रोत्साहन सुविधा कम हुनु, मागअनुसार उत्पादन गर्न नसक्नुजस्ता कारणले स्वदेशी उत्पादनको निर्यात बढ्न सकेको छैन ।
सहरी क्षेत्रमा वित्तीय लगानीको आवश्यकता बढेको छ
वैज्ञानिक र व्यवस्थित सहरी विकास गरी मुलुकको आर्थिक विकास गर्न नगरका आवधिक योजना तर्जुमा, वित्तीय व्यवस्थापन, स्थानीय आर्थिक योजनासहितका भौतिक तथा सामाजिक विकास गर्नुपर्ने अवस्था छ । साथै, तिनको तत्कालीन र दीर्घकालीन विकासमा विकास सहयोग व्यवस्थापनदेखि विविध कानुनीलगायतका कार्यविधि निर्माण तथा त्यससम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धानको आवश्यकता छ । नगरको विकासमा नगर विकास कोषले ऋण परिचालन गरी सहयोग गर्दै आएको छ ।
नमूना वस्ति (लाप्राक) र एनआरएनए भवन मेरै एजेन्डा हुन्
सत्य कुरा भन्नु पर्दा भूकम्पपछि नमुना घर बनाउने मेरै प्रस्ताव हो । यसलाई हाम्रा अध्यक्षज्यू, आईसीसी र एनसीसीलगायत सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीले स्वीकार गर्नुभयो । एनआरएनएको महत्वपूर्ण परियोजनामध्ये आफ्नै हेडक्वाटर पनि म कोषाध्यक्ष हुँदा मैले नै ल्याएको योजना हो ।